Botsoana: Adiresy Safari ho an'ny mpanankarena (sy malaza?)
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Botsoana » Botsoana: Adiresy Safari ho an'ny mpanankarena (sy malaza?)
Vao tsy ela akory izay dia nahatratra ny toeran'ny olo-malaza i Botswana rehefa naseho fa nanolotra peratra fifamofoana avy amin'ity firenena afrikanina ity ny printsy Harry tao amin'ny toby safari lavitra iray (honohono) any amin'ny faritra andrefan'ny valan-javaboary Makgadikegadi Pans any Botsoana.
Maninona no mandeha
Botswana, firenena tsy misy mpandeha an-tanety any atsimon'i Afrika, dia misy ny efitra Kalahari Desert, ny Okavango Delta, ny Central Kalahari Game Reserve, ny Chobe River ary ny National Park. Ny mpandeha dia maniry hahita zirafy, cheetah, rhino mainty, hyena, alika dia, voay ary ny elefanta lehibe indrindra eto an-tany, dia mangataka amin'ny mpanolo-tsaina azy ireo handamina ny safariany amin'ity faritra ity.
Mila antsasaky ny natiora
Ny firenena dia manana ny isan-jato avo indrindra amin'ny jeografia natokana ho an'ny fiarovana - manodidina ny 45 isan-jaton'ny velarantany. Raha tiana hoheverina ho faritra arovana dia tsy maintsy sokajiana ho "faritra iray amin'ny tany sy / na ranomasina natokana manokana ho an'ny fiarovana sy fikojakojana ny fahasamihafana biolojika, ary ny harena voajanahary sy ny kolontsaina mifandraika amin'izany, ary tantanana amin'ny alàlan'ny fomba ara-dalàna na mahomby hafa" (Kaongresy eran-tany momba ny valan-javaboary sy faritra arovana).
Manintona mpitsidika iraisam-pirenena maro karazana toa an'i Etazonia, firenena Commonwealth anglisy, Eropa Andrefana, Aostralia, Japon ary Kanada i Botswana. Afrika atsimo, ary Zimbabwe koa dia tsena loharano ho an'ity toerana tsy manam-paharoa ity. Ny fizahantany dia manodidina ny 16.3 isan-jaton'ny harin-karena faobe.
Tian'ireo mpitsidika i Botswana noho ny:
• Bibidia tsy mampino
• Sehatra kanto
• Valan-javaboary lavitra sy tsy misy olona
• efitrano fandraisam-bahiny manokana
• Mpikirakira tany mahomby (sy lafo)
• filaminana sy fitoniana politika
• Sariaka amin'ny olona
Na izany aza, ny mpitsidika dia tokony ho vonona amin'ny fotodrafitrasa tsy ampy, ny vidiny avo lenta ho an'ny safaris (politikan'ny governemanta - Kalitao avo lenta, fiantraikany ambany), ary ny fifandraisan'ny rivotra voafetra amin'i Eropa.
Veloma ry Zimbaboe. Salama Botswana
Ao amin'ny Move
Mahaliana ny fiara miainga avy any Zimbabwe mankany Botswana noho izay tsy ananany: tsy misy varotra amoron-dalana… tsy misy tobin-tsolika, tsy misy trano fisakafoanana, tena vitsy ny fifamoivoizana; na izany aza, ny olana lehibe… toerana fidiovana fidiovana voafetra sy sarotra.
Ny fanaraha-maso ny pasipaoro amin'ny sisin-tany dia tena fototr'izany saingy mety hampikorontana (na dia sarotra aza). Ity dia iray amin'ireo fotoana marobe izay mitarika ny fanandramana mahomby amin'ny fitetezam-paritany ny Mpitari-dalana anao. Mahafantatra ireo mpiasa eo amin'ny sisin-tany ireo mpitari-dalana ary afaka manamora ny fiasan'ny taratasy sy ny sarany. Ny fiezahana hahatakatra ny maha-birao ny rafitra dia saika tsy azo atao mihitsy, raha tsy hoe za-draharaha amin'ny kolontsaina sy ny fizotrany ianao. Ny tsara indrindra dia ny manolotra ny pasipaorinao any amin'ny Torolàlanao, miaraka amin'ny sarany takiana (amin'ny vola), ary mamakivaky ny dingana haingana araka izay tratra.
Ny toro-hevitra tsara indrindra: mitsikia, manaja fahalalam-pomba ary miala amin'ny làlana; ny tanjonao lehibe dia ny mahita ny bibidia any Botsoana… ity no nahasarika anao tany amin'ity faritra amin'ny planeta ity.
Farany. Tonga tany Ngoma Safari Lodge
Rehefa avy nandeha nandritra ny ora maro dia nahafa-po tokoa ny nahita ilay mpamily namono ny làlambe ary mamily ny làlana mankamin'ny lalana maloto izay niafara tamin'ny Ngoma Safari Lodge. Rehefa mijery ireo fananana an-tserasera aho dia tsy azoko antoka hoe marina tanteraka ireo vaovao navoaka. Na ny hevitra momba ny TripAdvisor aza dia ahiahiana. Mandra-pahatongako, maheno, mikasika sy mamofona ilay vokatra aho dia mihazona fisalasalana mahasalama.
Ny Lodge dia tonga lafatra ka sarotra ny mino fa eo afovoan'ny tsy misy izy. Tsy misy trano fandraisam-bahiny akaiky, tsy misy toeram-pivarotana lehibe (raha ny marina, tsy misy fivarotana na aiza na aiza), tsy misy trano fisakafoanana ary tsy misy mpifanila vodirindrina aminao. Eto no ahafahan'ny manankarena (ary angamba ny malaza) miaina sy mizaha ny habetsahan'ny bibidia any Botsoana mandritra ny fotoana ankafizinao amin'ny haitraitra kintana 5+ - manomboka amin'ny sakafo sy trano hipetrahana ka hatramin'ny serivisy mafana sy sariaka ary mahomby.
Faly noho ny fahatongavan'izy ireo sy ny fiarahabana mafana avy amin'ny mpiasa, ny vahiny dia entina any amin'ny efitrano fandraisam-bahiny izay anolorana zava-pisotro mangatsiatsiaka sy lamba famaohana mangatsiaka. Vita ny antontan-taratasy fitantanan-draharaha (andro / ora hiaingana, fampahalalana fidirana Wi-Fi, fotoam-pisakafoanana, fanaraha-maso manan-danja, lisitry ny hetsika).
Miaraka amin'ny fotoana hisakafoanana antoandro sy fitsidihana efitrano malalaka sy tsara noforonina ary fandroana - fotoana tsy ela io dia ny fitsidihan'ny biby ny hariva.
Ny liona, leoparda, elefanta, rhino mainty, hipopotama, ombidia afrikanina ary koa kisoa sy hena, impala, zebra ary zirafera ary maro hafa dia mety ho hita mandritra ny safari. Ny fahafaha-mahita dia miankina amin'ny toetr'andro, volana, ora amin'ny andro ary vintana maro.
Eo am-pizahana ny valan-javaboary, rehefa milentika ny masoandro, mijanona ny van ary lasa bar koktail, feno divay mamirapiratra avy any Afrika Atsimo sy manaikitra kely.
Avy eo dia miverina ao anaty fiara fitateram-bahoaka indray izy, mitady zava-manan'aina bebe kokoa, ary miverina any amin'ny Lodge mba hisotro zava-pisotro sy sakafo hariva.
Ny maraina Chilly Botswana dia tonga lafatra amin'ny sakafo gourmet bebe kokoa ary ny sakafo maraina dia tsy matsiro fotsiny fa aseho tsara.
Aorian'ny sakafo maraina mahasalama sy mahasalama dia fotoana tokony handehanana mankany amin'ny safari maraina. Tsy mahazo naoty 5-kintana ny fotodrafitrasa amoron-drano - koa manaova "lavadrano" alohan'ny hidiranao amin'ilay fiara fitateram-bahoaka. Ho fanampin'izany, ny valan-javaboary dia tsy manana magazay sy safidy amin'ny sakafo haingana, ka ilaina ny manangona ny rano, fàfana amin'ny masoandro, satroka, famaohana tanana, taratasy fidiovana, sela, fakantsary, batery ary kojakoja hafa izay hampahazo aina ny fiainana.
Fikarohana ny valan-javaboary Wildlife and Chobe National Park
Fampakaram-bady sy tantely tantely tsy hay hadinoina
Na dia sarotra aza izany (asa an-taratasy maro ary 48 ora farafahakeliny amin'ny fotoanao) ho an'ireo mpitsidika iraisam-pirenena hanambady any Botswana (ary mampametra-panontaniana amin'ny fanambadiana faharoa), dia azo antoka fa toerana mahafinaritra ho an'ny volan-tantely izany. Soso-kevitra iray amin'ny fanomezana mariazy ho an'ny mariazy ara-tontolo iainana ny vahiny mba handoavana rhino hamindra azy ireo ary halefa any anaty ala any Botswana.
Sarotra ny miala ao Botsoana. Betsaka ny biby hita, zaridaina sy renirano azo jerena, ka tsy ampy ny roa alina. Heverina ho iray amin'ireo toerana itadiavana safira voalohany indrindra any Afrika, ny indostrian'ny fizahantany any Botsoana dia miorina amin'ny sary na dia rakotry ny hazalambo mpihaza amboara aza ny tantarany. Soa ihany fa nampisondrotra ny indostrian'ny fihaza ilay fiakarana tsy mampino amin'ny fizahan-tsary ary nosakanana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 2014.
Ny fiainana manokana sy ny ala dia manome ny lamba ho an'ny fizahan-tany any Botswana ary efitrano fandraisam-bahiny mazàna no hipetrahan'ny vahiny 8-20 izay mety hahita lalao betsaka kokoa noho ny olona. Heverina ho marin-toerana politika sy azo antoka ho an'ny mpitsidika ny firenena. Tanjon'ny firenena ankehitriny ny hampitombo ny andro lanin'ny mpitsidika eto amin'ny firenena. Ny fijanonana dia manomboka amin'ny 7-10 andro; na izany aza, ny biraon'ny fizahantany dia te hampitombo isa.
Na dia heverina ho lavitra aza ny dia, Botswana dia tsy sarotra ny tratran'ny sidina iraisampirenena any Gaborone na Johannesburg, miaraka amin'ny sidina mampitohy amin'ny faritra safari. Ny làlana lehibe mamaky ny firenena dia mamela fitaterana mora amin'ny fiara sy ny fiara fitateram-bahoaka.
Fizahan-tany maharitra maharitra any Botsoana
Nandray ny andraikiny tamin'ny fitaritana indray ny fizahantany maharitra i Botsoana. Entanina ny fahafaha-miasa vaovao, ary arahabaina ny fiaraha-miombon'antoka, indrindra ho an'ny fanitarana hotely sy fanombohana. Tamin'ny taona 2016, ny fiaraha-miasa eo amin'ny governemanta Botswana, Afrika Atsimo ary Zimbabwe, miaraka amin'ny sehatra tsy miankina sy ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana dia nihaona tamin'ny tanjona hamorona fotoana vaovao hisian'ny fizahantany ara-tontolo iainana. Fantatra amin'ny maha-faritra iainana Greater Mapungubwe Transfrontier Conservation, ny tanjona dia ny hampifandray ireo faritra arovana ao Zambia, Botswana, Namibia, Zimbabwe ary Angola. Azo inoana fa hanitatra ny fizahantany ara-tontolo iainana any Botsoana sy ny faritra.
Izao no fotoana hitsidihana an'i Botswana. Mifandraisa amin'ny mpanolotsaina momba ny dia ary ataovy ny famandrihanao izao fa tsy taty aoriana.
Fiverenana mandinika ny fizahan-tany any Hawaii: Fa maninona no nikitika ny tendron'ny ranomandry ihany izy io?